Waa maxay madax banaani | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Waa maxay madax banaani
Hubaal wax ka badan hal mar ayaad maqashay ereyga banaan. Dhab ahaantii, waxaan dhihi karnaa in ay tahay moodada hadda iyo in ereygiisa Isbaanishka uu yahay mid madaxbannaan (inkastoo ay jiraan khubaro qaar ka mid ah oo bixiya farqi u dhexeeya labada).
Laakiin, Waa maxay freelancer? Sifooyinkee ayay leedahay? Sidee ayay uga duwan tahay kan madaxa-bannaan? Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso sidii madax-bannaani, halkan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor wax kasta oo kale.
1 Waa maxay madax banaani
1.1 Farqiga u dhexeeya madax-bannaanida iyo madax-bannaanida
2 Astaamaha qofka iskood u shaqeya
3 Maxaa loo baahan yahay in la noqdo madax-bannaani?
3.1 Go'aan qaado
3.2 Qalabkaaga shaqada
3.3 Waxay leeyihiin macaamiil
4 Halkee laga helaa shaqo
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono waa inaad si buuxda u fahamto macnaha ereygan. Madax-bannaani waa a qofka ka shaqeeya akoonkiisa, taas oo ah in la yiraahdo, si madax-bannaan. Waxay siisaa adeegyadeeda dadka kale ama shirkadaha, taas oo ah, waxay u shaqeysaa qolo saddexaad oo waydiisa shaqadeeda.
Maadaama aysan ka tirsaneyn shirkad, ama aysan u shaqeyn shirkad, laakiin ay si madaxbannaan u sameeyaan (naftooda, shaqadooda dadka kale), waa inay iska bixiyaan kharashka. Taasi waa, fasaxyada, fasaxa jirrada, caymiska, canshuuraha, iwm., wax walbaa waa kharashkaaga.
Farqiga u dhexeeya madax-bannaanida iyo madax-bannaanida
Sida aan horay kuugu sheegnay, qoraayaal badan ayaa dejiyay farqiyo taxane ah oo u dhexeeya madax-bannaaniye iyo madax-bannaaniye. Laakiin maxaa ka dhigaya inay u ekaadaan laba sawir oo kala duwan?
Dhinacna waxaa la yidhi Shaqsiyaadka xorta ah waxay ku hawlan yihiin shaqooyin marmar ah dakhli gaar ah iyo muddo cayiman. Taasi waa, waxaa loo shaqaaleysiiyay adeeg gaar ah, marka tan la sameeyo, xiriirku wuu dhammaanayaa. Dhanka kale, kuwa iskood u shaqeysta hawluhu waxay noqon doonaan kuwo xirfad leh ama ganacsi, muddo aan la cayimin oo dakhligoodu kala duwan yahay. Xaqiiqdu waxay tahay in dhammaan madax-bannaaniyaasha ay mar uun leeyihiin shaqooyin madax-bannaan iyo shaqooyin wakhti dheer ah; oo la mid ah ayaa ku dhici karta qofka iskood u shaqeysta.
Farqi kale ayaa ah taas Freelancers loogama baahna inay iska diiwaan geliyaan RETA (Maamulka Shaqaalaha Iskood u Shaqeeya), laakiin haa IAE (Canshuurta Hawlaha Dhaqaalaha). Waa maxay sababtu? Hagaag, sababtoo ah haddii shaqadaadu aysan gaarin mushaharka ugu yar ee xirfadlayaasha, uma baahnid inaad soo marto Lambarka Bulshada. Dabcan, marka aad timaadid waa shuruud qasab ah haddii aadan rabin in Hacienda ay soo garaacdo albaabkaaga.
Astaamaha qofka iskood u shaqeya
Iyada oo ku saleysan dhammaan kuwa kor ku xusan, waxaan ogaanay in madax-bannaanigu yahay qof:
Ismaamul, yacni, waxaad tahay qof iskaa u shaqeysta. Tani waxay ka dhigan tahay inuu yahay qofka go'aaminaya wakhtiga uu shaqayn doono, maalmaha uu shaqayn doono iyo meesha uu ka imanayo (waxay noqon kartaa gurigiisa, goobta fasaxa, xafiis, iwm.)
Waa madax u gaar ah, sababtoo ah isagaa habeeya maalin shaqo oo u gaar ah oo uu go'aamiyo saacadaha uu shaqaynayo, goorta uu qabanayo, sida uu u maamulayo, iwm.
Wuxuu daryeelaa dhaqaalahaaga, ama tan u wakiisho qof kale, laakiin waa inaad bixisaa kharashyadaada, cashuuraha, caymiska ...
Adiga ayaa dooran kara macaamiishaada. Oo iska dhaaf kii aan jeclayn. Marka hore tani waa wax aan la malayn karin laakiin marka aad haysato xoogaa xasillooni ah oo gaar ahaan sumcaddu kor u kacdo aad ayey u fududahay sababtoo ah waxaad ogtahay in macmiil kale uu iman doono.
Deji qiimahaaga. Dabcan, wax walba waxay ku xirnaan doonaan suuqa, tartanka, iwm. taas oo ah waxa miisaanku go'aamin karo.
Maxaa loo baahan yahay in la noqdo madax-bannaani?
Shaqada madax-bannaanida, ama shaqada madax-bannaanida, maaha wax xamaam ku leh nooc shaqo gaar ah. Xaqiiqda, waxaa jira waaxyo aad u badan oo shaqaalaha noocan ahi ay ku badan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, waa run taas Qaybaha barnaamijyada, naqshadaynta garaafyada, naqshadaynta shabakada, turjumaada, maamulaha bulshada, sawir qaadista, fasalada gaarka ah, abaabulka dhacdooyinka, suuqgeynta nuxurka ... waa halka ay ugu badan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kuwo kale oo badan.
Laakiin, ma loo baahan yahay in la buuxiyo shuruudo taxane ah si loo noqdo madax-bannaani? Runtu waxay tahay haa. Gaar ah:
Waxaan ka hadleynaa shaqo taas oo aad si dhab ah u tahay in hal gacan hore iyo kuwa kale ka dambeeyaan. Ma lihid taageero ama caymis ay macaamiishaadu kaa tagi doonin (ama inaad xitaa heli doonto macaamiil). Markaa kharashyadu waxay cuni karaan kaydadka aad haysato, haddii aanay jirin macaamiil, lacag ma jirto.
Sababtan awgeed, waa inaad madaxaaga si aad ah diiradda u saartaa mashruuca si aad u dhammaysato, saacado badan u hurto dhalashadiisa iyo inaad qaado tallaabooyinkeeda ugu horreeya. Taasina maaha oo keliya saacado, maalmo, toddobaadyo, ama bilo. Waa arrin sanado ah.
Is-maamul ahaan, Qofna kuma siin doono qalabka aad ku shaqeyso (Haddii aan shirkad ama shaqsi samayn, laakiin waa dhif). Sidaa darteed, waa inaad maalgelisaa si aad u hesho wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bixiso adeegga. Taasina waxay ka dhigan tahay in lacag laguu gelinayo.
Haa, waa run inaad dib u heshay, laakiin marka hore way ku kici kartaa.
Waxay leeyihiin macaamiil
Waxa laga yaabaa inay tahay heerka ugu sarreeya ee madax-bannaanida. La'aanteed macaamiil ma jirtid shaqaale ahaan sababtoo ah ma shaqayn kartid. Taasi waa sababta ay tahay inaad u raadiso dad ama shirkado doonaya inay kiraystaan ​​adeegyadaada.
Tani maaha wax fudud, maadaama aad arki doonto halka ay ku sugan yihiin macaamiishaada, geli qiimaha saxda ah ee adeega aad bixiso, oo wax kasta ka sarreeya sii natiijooyinka macaamiisha (maadaama aadan samaynin kuma sii waari doonaan). midkood).
Halkee laga helaa shaqo
Helitaanka shaqo madax-bannaani ahaan ma fududa. Taas waanu kaaga digaynaa. Laakiin sidoo kale ma aha wax aan macquul aheyn.
Iyadoo ku xiran shaqada aad rabto inaad u hurto, waxaad heli kartaa goobo aad ku bixin karto adeegyadaada, muujiso mashaariicda ama tusaalooyinka qoraaga oo aad shaqaaleysiiso.
Tusaale ahaan, waxaad leedahay goobaha sida Domestika, Freelancer, Freelancer, Workana ... halkaas oo qaar badan ay weydiiyaan xirfadlayaal shaqooyin kala duwan oo gaar ah. Hadda, taas kaliya kuma joogi kartid.
Waxa kale oo wanaagsan in la fuliyo xeeladaha suuq-geynta ee offline-ka ah iyo kuwa online-ka ah si aad u hesho macaamiil ka baxsan goobahaas. Ama waxa loogu yeero "albaabka qabow", taas oo ah, iimaylo ama booqashooyinka shirkadaha bixiya adeegyadaada.
Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso ayaa ah in shaqadu kaa tagi karto hal habeen ama ay qaadan karto toddobaadyo inuu mid yimaado. Markaa isku day inaadan quusan oo sii wad sababtoo ah, ugu dambeyntii, wax ayaa soo baxa.
Sawirka madaxa-bannaanigu ma kuu caddaaday? Shaki ma ka qabtaa dhinac kastaba? Na weydiiso waxaan isku dayi doonaa inaan kaa caawino inaad ka jawaabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Waa maxay madax banaani
Sida loo ogaado tixraaca cadastral
Waa maxay bangiyada anshaxa